Xaliimo Yarey "Ma jiro Xisbi doorasho ka qeyb gali kara xiligaan, sababtoo ah…"
Thursday February 13, 2020 - 18:36:28 in Wararka by Mogadishu Times
Muqdisho:-Guddoomiyaha Guddiga madaxa banaan ee Doorashooyinka Qaranka Xaliimo Ismaaciil Ibraahim (Xaliimo yarey) oo warbaahinta kula hadashay Magaalada Muqdisho ayaa waxay ka hadashay arimaha doorashooyinka qaranka iyo arrimo kale.
Xaliimo Yarey ayaa sheegtay inaysan jirin xisbi siyaasadeed oo xiligan ka qeyb geli kara doorasho ka dhacda dalka.
Sababta ayay ku sheegtay guddoomiye Xaliimo Yarey inay tahay in waqtigan ay wax badan ka dhiman yihiin nidaamka xisbiyada.
Hadalkan ayaa waxay ka sheegtay guddoomiye Xaliimo Yarey, kadib markii xalay ay ka qeyb gashay dood looga hadlayay doorashooyinka oo lagu qabtay Magaalada Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay in 2021-ka ay ka dhici doonto doorasho qof iyo cod ah dalka,halka xildhibaannada Baarlamaanka iyo guddiga doorashooyinkaba ay sheegeen in doorasho qof iyo cod ah aysan dalka ka dhici Karin.